ကလေးသည်လူကြီး၏ဖခင် — Steemit
အဆိုပါစကားပုံ "ကလေးက Man ၏ခမညျးတျော၏" အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့အနက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်သူကြီးပြင်းလာအဖြစ်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အပြုအမူနှင့်အမူအကျင့်သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းဆိုလို။ ကျွန်တော်တို့ကိုဒီစကားပုံ၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်. ကြောင့်မူလကအဓိပ်ပာအတိအကျအရာကိုအဖြစ်လေ့လာသင်ယူကြပါစို့။
ယင်းစကားပုံ၏မူလအစ - ကလေးလူ၏ခမညျးတျောဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါစကားထူးမူလကနာမည်ကျော်ကဗျာဆရာက William Wordsworth ကရေးသားခဲ့သည်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအဆိုပါအသုံးအနှုန်းအရေးပါတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသည်, ပြီးတော့ကတည်းကအမျိုးမျိုးသောအခါသမယပေါ်တွင်အသုံးပြုထားပြီး 1802. ထွက်ခဲ့သည်ကြောင်း Wordsworth ရဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်, "My Heart Up ကိုခုန်" ၌ထင်ရှား၏။
ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများ၏စကားမစပ် Wordsworth ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူအလွန်သက်တံ့မှာရှာဖွေနေရှငျလနျးသူနေဆဲသူသဘောသဘာဝကြည့်ကဲ့သို့တူညီသောအပျြောအပါးတွေ့ကြုံလူကြီးအဖြစ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်သောအရာကိုသူ့ရဲ့ကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌သူ့ကိုနှစ်သက်သောလည်းလူကြီးအဖြစ်သူ့ကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။
သူ့ကိုနှုန်းအဖြစ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေ့ရက်ကိုပြသထားတယ်ဘယ်အရာကိုနံနက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပြသထားတယ်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌သိတော့ဘာကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏အသက်တာ၌သူ၏အလေ့အထများနှင့်စကားရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်ဒါပေမယ့်သဘာဝပါပဲ။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းကောင်းသောအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, သူကအထဲကမှတဆင့်တစ်ဦးစည်းကမ်းဘဝကိုဦးတည်သွားစေဖွယ်ရှိသည်။ သူကြီးပြင်းလာအဖြစ်အလားတူပင်မကောင်းတဲ့အလေ့အထကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကလေးတစ်ဦးနေမကောင်းအလေ့အထများအတွက်လုပ်ကြဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။
ကလေးသူငယ်က Man ၏ခမညျးတျောဖြစ်ပါသည် - သွန်သင်
မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများ၏အခန်းကဏ္ဍကို၎င်းတို့၏မိဘများမှတက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ကိုတုပဖို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ personality.Children တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးပါလှသည်။ ဒါဟာမိဘတွေကကလေးက၏ညာဘက်အကငျြ့ examples.Ensuring ကောင်းသောတင်ထားရန်အဘို့အထို့ကြောင့်အရေးကြီးသောသောသူမူသူ၏အသက်တာ၏ကျန်များအတွက် imbibes ကားအဘယ်သို့အဖြစ်အလွန်အရေးပါသည်။
esteem good-karma child father man
upvotebank (65) · last year
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by taylae from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.